कविडाँडा र साहित्यिक भव्यता,(धनराज गिरी)
धन भएरमात्र केही हुँदैन, मन पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा मानवसमाजमा पटकपटक प्रमाणित भएको छ । कात्रोमा गोजी हुन्न भन्ने कुरा सबै धनीहरुलाई थाहा छ, तर व्यवहारमा उतार्ने धनीहरु कति छन् ? पूर्वी चितवनमा जीवा लामिछानेसरह आर्थिक हैसियत हुने धनाढ्यहरुको कमी छैन तर अर्को जीवा प्रकट हुने लक्षण देखिन्न । मान्छे साँच्ची नै मान्छे हो भने, यदि ऊ समर्थ छ भने इज्जतका लागि पैसा खर्च गर्दछ । पैसाका लागि इज्जत खर्च गर्ने मूर्खहरु समाजमा प्रशस्त भेटिन्छन् । दुनियाँ यस्तै छ । बुद्धिमान्लाई सम्झाउनु पर्दैन, मूर्खलाई जति सम्झाए पनि हुँदैन । जसले अरुलाई सम्मान गर्दछ उसले समाजमा स्वतः सम्मान पाउँछ । सुन्तलाको बोट रोपेपछि खुर्सानी फल्दैन । समाजलाई दिन जान्ने पात्र कहिल्यै कंगाल हुँदैन । ३४ वर्षअघि नवलपरासी जिल्लाको पहाडी भेग रूचाङ गाविसको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षक थिएँ म । पराजुली परिवारमा बस्दथें, मीतज्यूको घरमा । मितिनी आमा सारै दयावती हुनुहुन्थ्यो । भौतिकताको कमी थिएन । त्यो पहाडमा पनि दुई सय मुरी धान भकारीमा आउँथ्यो । घरमा कहिल्यै पाहुना नटुट्ने । कथम् पाहुना आएनन् भने आमाले मलाई एउटा पाहुना खोज्न लगाउनु हुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो– “मास्टरबाबु पाहुना हामी गृहस्थीका लागि लक्षिन हुन्छन् । दिएर, खुवाएर, कन्जुश नभएर धन सकिँदैन; सह आउँछ । म त्यतिखेर कुरा बुझ्दैन थिएँ । स्थायी पाहुना म स्वयम् थिएँ । आज आएर मितिनी आमाको जीवन–दर्शन छर्लङ्ग भइरहेछ ।
आज जेठ ६ गते । हामी चितवनका स्रष्टाहरुको चाड । यस्तो दिनलाई म चाडपर्व नै ठान्दछु । ‘कविडाँडा’ हाम्रो साहित्यिक धाम । दाजु एलबी क्षेत्रीको मन, यो साहित्यिक लगानी । पोखराबाट दाजु सरुभक्त आउने कुरा छ । काठमाडौंबाट मित्र श्रीओम रोदन, प्यारे मधुपर्क । हामी सबै जम्मा हुने छौं । एलबी दादाको बारेमा म केही पनि बोल्दिनँ । उहाँको कर्मयोग बोलिरहेछ । फगत् साथ खोज्नुहुन्छ दाजु, दिलदार क्षेत्री, यत्ति भनौं । अर्का क्षेत्री रामबाबु घिमिरे, आजका दुलाहा ! अहा, रामबाबु सर दुलाहा ! हामी जन्ती । यी क्षेत्रीका बारेमा, रामलीलाका बारेमा, मैले अझै लेख्नै सकेको छैन । म लेख्ने प्रयासमा छु । लेख्न नपर्ने कुराहरु धेरै लेखें, समयले लेखायो । अब लेख्न पर्ने कुराहरु लेख्ने मुडमा छु । ‘निबन्ध शिरोमणि’, हाम्रा लागि, चितवनका लागि, रामबाबु घिमिरे आफ्नो निबन्धमा कसरी प्रकट हुन्छन्, उनको शैली कस्तो छ र के लेख्छन्– हामी सबैलाई थाहा छ । आफैँलाई उदाङ्ग पारिदिन्छन् । असत्य लेख्दैनन् । पढ्दापढ्दै अझै पढिरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने बनाउँछन् आफ्ना पाठकहरुलाई । उनको लेखनशक्तिका बारेमा समीक्षा गर्ने काम मेरो होइन– विद्यावारिधि गौतम, मीतवा पोखरेल र भविष्यवक्ता मित्र कपिलज्यूलाई म अपिल गर्दछु । पूर्णप्रसाद अधिकारीलाई बिर्सिएँ भने यो लेख पूर्ण नहुन सक्छ । छोरी ज्ञानु अधिकारी पनि मैदानमा उत्रिएकी छिन् । म उनीभित्र अपार सम्भावना देखिरहेको छु । उनै ‘अनर्गल प्रलाप’लाई आज हामी माया गर्दैछौं । पुरस्कार र सम्मान दया होइन, माया हो । लेखक योग्य भएमा उसले जिउँदो छँदै यो सम्मान पाउनुपर्दछ । शतवार्षिकी, सालिक, स्मृतिग्रन्थ, शोकसभा फगत् नाटक हुन् । बाउ र आमाको नाममा गरिने श्राद्ध पनि निरर्थक हो, चारतारेहरुले बीपी. लाई र लालबहादुरहरुले पीएललाई स्मरण गरेझैँ । मरेपछि अध्याय समाप्त ! जे हुनुपर्छ त्यो हाताहाती हुनुपर्दछ । उधारो कारोबारमा कमसेकम, मलाई कत्ति पनि विश्वास छैन । आजै भन्दछु– धनराज स्मृति दिवस आवश्यक छैन । म मरेपछि मलाई कसैले पनि सम्झनु पर्दैन । तपाईंहरुले संझिएको कुरा म थाहा पाउँदिनँ, निरर्थक भएन त !
एउटा रोचक प्रसङ्ग– मित्र रोदनले रामबाबु सर पढ्नुभएको रहेनछ । रामबाबु सरका निबन्धहरु पढेपछि उहाँले मलाई झन्डै भौतिक कार्बाही गरेको । भन्नुहुन्छ– ‘गिरीजी, यो के गरेको ? यस्तो प्रतिभालाई चितवनमै लुकाएर राख्ने ! यति राम्री निबन्ध सुन्दरीलाई बुर्का लगाइदिने ! मसँग भेट गराउनु पर्दैन ? चितवनले आफ्नै हिरालाई चिनेन हौ । छिट्टै रामबाबु सरको एउटा निबन्ध पठाइदिनुहोस्, मधुपर्क बेचैन छ ।’ के उत्तर दिऊँ ? मैले रामबाबु सरका लागि केही गर्नै सकिनँ । रोदनजीसित क्षमा मागें । विकल्प थिएन । संप्रेषण पञ्च वर्षीय योजनाभित्र प¥यो । संविधान र संप्रेषण एकैचोटि । बिचरा रामबाबु ! खैर, आज म अलि बेग्लै कुरा गर्छु । रामबाबु सर अब जाग्नुहुन्छ । फ्रिजभित्र बस्दाबस्दा दिक्क मान्नुभएको छ । जे होस्, काठमाडौंमा घिमिरे कान्छाका बारेमा चर्चा भएछ । आखिर घिमिरे हुन्, चर्चा भइहाल्छ । माधव बूढा, जगदीश दादालाई सम्झिन पुगें ।
‘कविडाँडा’ आज ‘कविडाँडा’ जस्तै भएको छ । वर्षमा आठ– दस पटक कविडाँडा पुग्न पाइएन भने कस्तो–कस्तो लाग्छ । कविडाँडा माइती र मेरो मन नियास्रिएकी चेली भएको छ । म पुग्छु, कैलाशनगर । सन्यासी र कैलाशको बीचमा पौराणिक नाता छ । त्यसमाथि एलबी दादाको दैवी–स्नेह ! कसरी नजाऊँ ? रामबाबु सर, हार्दिक बधाई ! वर्षमा कमसेकम एक पटक यसरी नै बधाई दिन पाइयोस् । चितवन मदन पुरस्कारबाट धेरै टाढा रहेको छ । यो ‘आइस—ब्रेक’ पनि सरबाटै भइदिए कति राम्रो हुने थियो ! प्रज्ञामा, आजसम्म चितवनले प्रवेश पाएको रहेन छ । विनोदीज्यू, नन्दनज्यू र सरमध्ये कोही त्यहाँ पुगे हामी कति रमाउँथ्यौं ! रामबाबु सर, जीवन गतिशील भएमा मात्र गन्तव्यसम्म पुग्छ कि ? अरु के भनौं ? आज म सारै खुसी छु । यो लेख लेख्दै गर्दा म डराएको पनि छु । आजभन्दा ठीक चार दिनअघि अर्थात् जेठ २ गते मैले यो लेख लेखेको हुँ । ६ वर्षअघि ठीक त्यही दिन म टुहुरो भएको हुँ । जेठ २ गते र ३ गते आए पछि म झस्किन्छु । मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई पनि सम्झिन पुग्दछु । मन न हो, जता पनि पुग्छ । मन हो पीर मान्छ । मन आनन्दितमात्र हुन जान्दैन । जीवनमा फूलैफूलमात्र कहाँ हुन्छ र ?
एलबी दाजु, हृदयले ‘लेख्’ भन्यो लेखें । दाजुले चाल्ने हरेक सत्कर्ममा यो भाइको साथ रहने छ, यो पक्का भयो । रोदनज्यू, अब तपार्ईंले रामबाबु सरलाई चिन्नुभयो । अब मोतीराम बन्ने जिम्मा तपाईंको, रामायण तपाईंकै जिम्मा । यति भन्दैमा म मौन रहने छैन । यो मेरो स्वभावै होइन । साहित्यिक मित्रहरु, हामी सबै पुरस्कृत भएको दिन हो आज । आउनुहोस्, यो चाडलाई अझ रमाइलो पारौं । म गजल गाउने छु, गीत गाउने छु, झुम्ने छु, रामबाबु सरको खस्रा गाला चुम्ने छु ।
एलबी दाजु नै अध्यक्ष रहेको संस्था ‘कविडाँडा साहित्य समाज’ले एक हप्तापछि नै अर्को कार्यक्रम पनि भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्दैछ । कवि एवं निबन्धकार भाइ सङ्गीत आयामको ‘शरणार्थी उज्यालो’ कवितासङ्ग्रहको विमोचन कार्यक्रमको आयोजक हो ‘कविडाँडा साहित्य समाज’ । कवि आयाम कविडाँडाकै हुन्, उनलाई यस अवसरमा कसरी भुल्नु ! जेठ १४ गते शनिबार भरतपुर नगरपालिकाको सभाहलमा हुने यो कविताकृति विमोचन कार्यक्रमलाई पनि आजजसरी नै हामी सबै मिलेर सफल बनाउनु छ । यस्ता एकभन्दा एक कार्यक्रम गरेर नाम र पहिचान कायम गर्ने कविडाँडा धन्य छ आफैँमा । एलबी दाजु र अरु सहकर्मीहरुलाई पनि आज हुने कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा बधाई दिन मैले कन्जुस्याइँ गरेको छैन र गर्दिनँ पनि ।